Vaovao - karazam-panofanana mavesatra 5 hampitahana fiofanana mavesatra maimaim-poana no mpanjakan'ny fampiofanana mavesatra
Ny fampiofanana mavesatra dia azo zaraina ho karazany dimy: ny fampiofanana tena, ny fiofanana amin'ny tarika fanoherana, ny fiofanana mekanika, ny fiofanana amin'ny tady ary ny fiofanana mavesatra maimaimpoana. Ireo karazana fanatanjahantena dimy ireo dia samy manana ny tombony sy ny fatiantoka entiny amin'ny resaka fiarovana sy tanjaka hozatra, ary ny fampiofanana mavesatra maimaimpoana amin'ny fampiasana barbells sy dumbbells no mpanjaka fampiofanana mavesatra.
Misy hetsika fiofanana tsy tambo isaina, izay azo sokajiana arakaraka ny fitaovana ampiasaina. Ho fanampin'izay, ny karazana fomba fanazaran-tena tsirairay dia samy manana ny tombony sy ny fatiantoka ananany, noho izany dia tsy maintsy fantatrao aloha ny toetra mampiavaka ny karazana fampiofanana tsirairay alohan'ny hisafidiananao ny tetikasa mety.
Ireo karazana fiofanana mavesatra dia azo zaraina ho “fanofanana tena” izay tsy mampiasa fitaovana ary miankina tanteraka amin'ny lanja manokana, “fiofanana amin'ny tarika fanoherana” izay mampiasa tarika fanoherana, “fiofanana mekanika” izay mampiasa milina fanofanana, “fiofanana tady »Izay mampiasa tady, ary karazana" fampiofanana mavesatra maimaimpoana "dimy amin'ny fampiasana dumbbells na barbel.
Amin'ny ankapobeny, ny karazana fomba fiofanana rehetra dia mandrakotra ny hozatra ampiasaina. Ohatra, rehefa mampiasa "fiofanana mandeha ho azy" sy "fiofanana mekanika" hampiasana io hozatra io ihany, ny vokany dia hiovaova arakaraka ny fahasarotana amin'ny fampiharana sy ny lanjany ampiasaina, ka amboary ny karazana fomba fiofanana arakaraka ny hozatra kendrena, na mampiasa maro karazana anao Afaka mahazo vokatra tsara ianao amin'ny fampiharana ny hozatra mitovy amin'ny fomba mitovy.
Ny fomba fampiofanana mavesatra toa ny fijoroana na fampiasana ny lanjan'ny vatanao manokana hampiasana ny hozatry ny kibonao dia antsoina hoe "fampiofanana samirery."
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fampiofanana autologous dia ny tsy mila fampiasanao fitaovana. Ny olona tsy manam-potoana na teti-bola handehanana any amin'ny gym dia afaka manao fiofanana autologous ao an-tranony ihany koa nefa tsy mandany antsasaky ny ampolony.
Tombony lehibe iray hafa amin'ny fampiofanana autologous ny hoe na dia ireo novizin'ny fampiofanana mavesatra aza dia afaka mihantsy am-pilaminana ny fetran'ny hozatra nefa tsy miahiahy momba ny olan'ny barbel na dumbbells.
Ny fiofanana autologous dia tsy mitovy amin'ny fampiofanana mavesatra amin'ny fampiasana fitaovana na milina, ary tsy misy fomba ahafahana mandanjalanja tsara ny haben'ny enta-mavesatra. Raha maivana loatra ny enta-mavesatra dia tsy hisy vokany ampy. Raha mavesatra loatra ny enta-mavesatra, dia tsy ho afaka hameno tsara ny isan'ny fotoana mety, ary aorian'ny fanamafisana ny tanjaky ny hozatra amin'ny ambaratonga iray dia tsy azo ampitomboina ny enta-mavesatra. Amin'izao fotoana izao dia mila fotoana fanampiny ny fanitsiana ny enta-mavesatra be arakaraka ny tinady.
② Fanofanana tarika fanoherana
Na dia tsy maintsy omanina ho an'ny "fiofanana amin'ny tarika fanoherana" aza ny fitaovana, dia azo tanterahina ao an-trano toy ny fanofanana tena ihany izany, ary mora raisina amina dia lavitra na fivezivezena.
Ho fanampin'izay, ny fanovana fotsiny ny toeran'ny tarika fanoherana sy ny fanitsiana ny halavany dia mety hampitombo na hampihena ny enta-mavesatra mora foana. Ny tarika fanoherana dia afaka manova zavatra isan-karazany ihany koa, izay azo lazaina ho fomba fiofanana marobe.
Raha ny fahitana ny fiatraikan'ny fiofanana, ny fiofanana amin'ny tarika fanoherana dia misy fiantraikany kely amin'ny tsy fahatomombanana, ary tsy misy fatiantoka enta-mavesatra saika ny elanelam-potoana rehetra azo ovaina. Izy io dia afaka mamorona mora foana ny simia roa an'ny "fanangonana metabolita anaerobika" sy "fanjakana hypoxic". Fanerena ara-nofo hahatratra ny vokatry ny hozatra.
Etsy ankilany, ny fihenjanan'ny tarika fanoherana dia miova be amin'ny halavany, noho izany amin'ny toerana voalohany izay mbola malalaka sy fohy ny tarika fanoherana dia kely ihany koa ny enta-mavesatra amin'ny hozatra.
Rehefa ampiasaina ny tarika fanoherana dia somary kely ny enta-mavesatra rehefa mivelatra ny hozatra rehefa anaovana ny hozatra, noho izany dia sarotra kokoa ny miteraka fahasimbana amin'ny hozatra, ka sarotra ny mampiroborobo ny hozatra amin'io lafiny io.
③ Fiofanana mekanika
Ny mampiavaka ny "fiofanana mekanika" dia ny hoe azo antoka kokoa raha ny lanjany dia mitovy amin'ny fampiofanana barbell.
Ho fanampin'izany, ny làlana mihetsika dia voafehin'ny rafitra mekanika, noho izany raha ny fahitana ny fahasarotana amin'ny fianarana ny fihetsika dia tsotra kokoa noho ny fomba fiofanana hafa izy io, ary mora kokoa ny misy fiatraikany amin'ny hozatra kendrena.
Ny ankamaroan'ny masinina fanofanana mavesatra dia mampiasa bloc lead counter, ary ny lanjany dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny fanitsiana ireo bolt. Noho izany, raha ny lanjan'ny singa iray manontolo dia ahitsy amin'ny fotoana mitovy mandritra ny fanatanjahan-tena dia tsy ilaina ny miasa be loatra.
Na dia miorim-paka aza ny lalan'ny môtika, ny herin'ny fifandonana eo anelanelan'ny tsorakazo, ny lanjan'ny lanjany ary ny làlana dia hisy fiantraikany amin'ny fihenan'ny (fihenan-tsofina eccentric) ary hampihena ny enta-mavesatra. Na dia miovaova aza ny vokatry ny fikorontanana isaky ny milina, dia manome enta-mavesatra ny hozatra mandritra ny fihenan-java-maningana, izay lakilen'ny fampiroboroboana ny hozatra, noho izany dia mila mijery manokana an'io ianao rehefa mampihatra fiofanana momba ny milina.
Amin'ny ankapobeny, ny fiofanana mekanika dia fomba fanofanana miaraka amin'ny tombony be.
④ Fiofanana amin'ny tady
Ny "fiofanana amin'ny tady" dia an'ny karazam-piofanana mekanika ihany koa, fa eto kosa hampahafantarinay ireo singa fiofanana mekanika amin'ny fampiasana tadiny tsy miankina.
Ny fanofanana tady dia afaka manitsy mora foana ny lanjany toy ny fiofanana mekanika, izay manampy amin'ny fihantsiana soa aman-tsara ny fetran'ny hozatra. Ho fanampin'izany, ny milina tady ankapobeny dia afaka manova ny toerana misy ny tady, mba hahafahany mampiditra enta-mavesatra hatrany ny hozatra amin'ny lafiny rehetra nefa tsy voakasiky ny fitarihan'ny hery misintona. Na ireo faritra miasa mafy toa ny fampiofanana mavesatra maimaimpoana sy ny fiofanana autologous aza dia mety hampiditra entana mora foana.
⑤ Fiofanana mavesatra maimaimpoana
Ny "fampiofanana mavesatra maimaimpoana" amin'ny fampiasana bariboleta na dumbbells no mpanjakan'ny fampiofanana mavesatra.
Aorian'ny fahaiza-manao dia tsy vitan'ny hoe mihantsy lanjany be ianao, fa tsy ho very koa ny enta-mavesatra noho ny fikorontanana mandritra ny fihenan'ny centrifugal toy ny fampiasana milina.
Ho fanampin'izany, ny fampiofanana mavesatra maimaimpoana mazàna dia mampiasa vondrona hozatra betsaka, izay afaka mahavita fanatanjahan-tena be dia be. Ny fampiofanana mavesatra maimaimpoana dia manome tsindry be amin'ny vatana iray manontolo ary manampy amin'ny fanentanana ny tsimokaretina hormonina hampiroborobo ny fivoaran'ny hozatra.
Ireo izay hanaraka fiatraikany fiofanana avo alohan'ny handehanana any amin'ny gym dia mety maniry ny hampiasa programa fampiofanana mavesatra maimaimpoana.
Na izany aza, ny fiofanana mavesatra maimaimpoana dia tsy manana lalan'ny fivezivezena ary sarotra ny mitazona ny fihetsika marina mandritra ny fizotran'ny fiofanana, noho izany dia tsy fahita firy ny vokany tsy hisy vokany noho ny fihetsika tsy marina. Ny tsy fitandremana kely mandritra ny fiofanana dia mety hiteraka ratra.
Inoana amin'ny ankapobeny fa ny fampiofanana mavesatra maimaimpoana dia "mety amin'ny veterans fampiofanana mavesatra," fa raha mbola tsy mihoatra ny fahaizany ny lanjany dia tsy hisy atahorana. Afaka manandrana izany amin-kerim-po izany ireo vehivavy sy ireo vao niofana mavesatra.